China Birds ekara metal osisi hanga Mgbaaka njide Birdhouse ogbe emepụta na suppliers | Shengrui
BIRD metal mgbodo imewe maka nghọta lantern, osisi, ulo nnụnụ,ifufe chime wdg.
Ihe: Ndị a kwụgidere Bird metal mgbodo na-mere nke elu-edu ígwè na ntekwasa na nwa ntụ ntụ. Ha na-egbochi nchara na-adị ogologo ndụ. Ogo dị elu na-eme ka ha sie ike na njedebe ojii na-eme ka ebe obibi gị mara mma ma kwekọọ na ihe ọ bụla na-adabere na ya.
BIRD metal mgbodo imewe maka nghọta lantern，osisi, ulo nnụnụ，ifufe chime wdg.
Size: 6 ”L, 8” L.10 ”L.12” L, 18 ”L ma ọ bụ ahaziri.
Mfe iji wụnye: Abịa na-arịọnụ kposara na arịlịka. Nkọ osisi na-adị mma maka osisi nsu osisi, ogwe osisi, ma ọ bụ ọbụna mgbidi ime ụlọ. Atụmatụ na-agbanwe agbanwe na-enyere aka echekwa ihe.
A na-ejikarị ya: Ọmarịcha maka ịgbanye ọkụ ọkụ, ihe mkpuchi ụlọ, obere nkata ifuru, eriri mmiri ozuzo, ụlọ nnụnụ, ihe ịchọ mma ezumike.
Nnukwu ngwa maka ime ụlọ gị, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ, ụzọ mbata, patio, veranda, ogige, ogige ngere osisi ọ bụla na ime ụlọ ọzọ.
Osote: Modern Rectangle Planter Igbe